मंसीर २०, ललितपुर । साइन्स इन्फोटेक डट कम डट एनपीका प्रधान-सम्पादक गोपाल भण्डारीलाई विज्ञान तथा प्रविधि पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) को कार्यालय, खुमलटार, ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भण्डारीलाई पुरस्कार प्रदान गरे । पुरस्कार राशी ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । […]
१८ मंसीर, ललितपुर । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा प्रतिभाको सम्मानका लागि ४ नयाँ पुरस्कार स्थापना गरेको छ । जस अनुसार रु दुई लाख राशिको ‘कुलपति राष्ट्रिय नव–प्रवर्तन पुरस्कार’, रु २५ हजार राशिको ‘महिला विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार’ रु २५ हजार राशिको ‘विज्ञान शिक्षक पुरस्कार’(प्लस टु सम्म), रु […]
ह्वाट्सएपका १० फिचर्स
एजेन्सी, स्मार्टफोनमा प्रायः सबैले प्रयोग गर्ने ह्वाट्सएप प्रयोग गर्छन् । ह्वाट्सएपका प्रयोगकर्ताहरुलाई केही खास फिचर दिएको छ तर ह्वाट्सऐपमा केही सेक्रेट फिचर्सपनि रहेका छन् । जसको सहयोगले तपाईको च्याटिङ एक्सपिरियन्सलाई अझ उत्कृष्ट बनाउँछ । यसको माध्यमबाट फोटो, भिडियो सजिलै सेयर गर्न सकिन्छ । ह्वाट्सएपको लोकेशन फिचरको माध्यमबाट गुगल म्यापको सहायताले नयाँ ठाउँ पनि सजिलै पुग्न […]
बीबीसी, ‘भिडियो–शेयरिङ एप’को रुपमा अत्यन्त लोकप्रिय टिकटकको निर्माता बाइट–डान्सले मोबाइल निर्माणको व्यवसाय सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । टिकटक पछिल्लो समय सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको समाजिक सञ्जाल एप हो । हाल यसमा ५० करोड नियमित प्रयोगकर्ता छन् । विश्वभरी टिकटक एक अर्ब पटक डाउनलोड गरिएको विश्वास गरिएको छ । एपमा प्रयोगकर्ताले १५ सेकेण्डसम्मको भिडियो […]
असोज १, २०७६, काठमाडौँ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज असोज १ गते सातौँ ‘राष्ट्रिय विज्ञान दिवस’ २०७६ सफलतापूर्ण भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । यस वर्षको राष्ट्रिय बिज्ञान दिवसको नारा “विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन : सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण” भन्ने रहेको छ । उक्त दिवसको मूल समारोह समितिको मुख्य कार्यक्रम आज राष्ट्रियसभा […]
३० भदौं, काठमाडौँ । नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) ‘नेपाली स्याट–१’ ले नियमितरूपमा ग्राउन्ड स्टेसनसँग सम्पर्क गर्न थालेको छ । स्याट–१ ले पठाएको सूचना, तथ्यांक र अन्य विवरण स्टेसनले नियमित रेकर्ड गर्न थालेको हो । स्याटेलाइटमा जडान भएको ब्याट्रीको अवस्था, पृथ्वीलाई फन्को लगाउन लाग्ने समयावधि, पृथ्वीसँगको दूरी, सो उपकरण रहने स्थान आसपासको तापक्रमजस्ता सूचना ग्राउन्ड स्टेसनले […]
संसारकै सबैभन्दा सानो ल्यापटप
एजेन्सी, पोल क्लिन्गर नामका युवकले सबैलाई आश्चर्य चकित पार्दै संसारकै सबैभन्दा सानो ल्यापटप निर्माण गरेको छ । १ इन्च मात्र स्क्रिन भएको उक्त ल्यापटपलाई उनले थिंक टाइनी नामाकरण गरिएकाे छ । यस ल्यापटपमा शून्य दशमलव ९६ इन्चको डिस्प्ले र किबोर्डको बीचमा कर्सर कन्ट्रोलर रहेको छ । पोलले यसलाई लेनोभो थिंकप्याड ल्यापटपको सानो रूप जनाएको छ […]
नेपालको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन ‘लाइडार सर्वे’ सुरु
१६ भदौं, काठमाडौं । नेपालको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन नापी विभागले ‘लाइडार सर्वे’ सुरु गरेको छ । विकास निर्माणलगायत ठूलो क्षेत्रमा टेवा पुग्ने यो सर्वेलाई नापीले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा गत वर्षदेखि अगाडि बढाएको हो । हवाईजहाज उडाएर गरिने उक्त सर्वेको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि मङ्सिरदेखि मात्र जहाज उडाइने छ । पहिलो चरणमा २० हजार […]
यदि तपाईको मोबाइलमा ब्याट्री नटिकेर हैरान हुनुहुन्छ भने अपनाउँनुस् यी उपायहरु
पछिल्लो समय मोबाईल फोनले घडि, क्यामरा, रेडियो लगायतका काम गर्ने भएको छ । धेरैको दिनभरकिो सहारा बन्दै आएको छ मोबाईल सेट । तर, धेरै जसो स्मार्टफोनको प्रयोगकर्ताहरु ब्याट्री नटिक्ने समस्याले गर्दा हैरानीमा हुन्छन । केहि सामान्य कुरामा ध्यान दिन सकियो भने यो तनावबाट मुक्त हुन सकिन्छ । पटक–पटक चार्जिङ नगर्नुहोस हामी धेरैको मोबाईल लत भैसकेको […]
पढ्नुहोस्, हामीले फोनमा कुरा गर्दा शुरुमा बोल्ने ‘हेल्लो’ भन्ने शब्द कसरी भयो ?
हामी हरेक व्यक्तिले फोन प्रायोग गर्छौं हामी फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो हेल्लो भनेर बोल्छौं र त्यसपछि मात्र बाँकी कुराकानी हुन्छ । यो फोनमा किन सधै बोल्नु भन्दा अगाडी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । आज हामी यसको वास्तविकता र कसरी भयो भन्ने कुराहरु यहाँ उल्लेख गर्न गर्ने छौं […]
९ भदौं, काठमाडौँ । चीनले पाँच वर्षसम्म निःशुल्क स्याटलाइट इमेज उपलब्ध गराउने ! नापी विभागले विकास निर्माणका आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व अति आवश्यक पर्ने स्याटलाइट इमेज लिन थालेको छ । नापीले समग्र नेपालको स्याटलाइट इमेज लिन थालेको हो । विकासनिर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि अद्यावधिक स्याटलाइट इमेज आवश्यक पर्छ । चीन सरकारको सहयोगमा यस्तो इमेज लिने […]
८ भदौं, काठमाडौं । विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको समस्याका कारण नेपालले बर्से्नि झन्डै ९० अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ देखि ३ प्रतिशत अर्थात् ६० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । जलवायु परिवर्तनको […]
एजेन्सी, भिडियो स्ट्रिमिङ प्लाटर्फम युट्युबले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ फिचर ल्याएको छ । थप गरिएको उक्त नयाँ फिचरका कारण अब युट्युवको गीत स्ट्रिमिङ्ग हुने प्लाटर्फम युट्युब म्युजिकमा कम डाटा खर्च गरी गीत सुन्न तथा हेर्न सकिनेछ । तथापि यो फिचर केवल प्रिमियम प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । नयाँ फिचर अनुसार अब युट्युब म्युजिकको प्रियिम […]
सोनीले मोबाइलभन्दा हलुका मिनि एयर कन्डिसनर निर्माण “भिडियोसहित”
एजेन्सी, जापानको बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी सोनीले मोबाइल फोनभन्दा हलुका मिनि एयर कन्डिसनर निर्माण गरेको छ । उक्त मिनि एयर कन्डिसनर टिसर्टमै फिट हुने जनाइएको छ । यसको नाम ‘रियोन पकेट’ राख्यो । यस एसी ब्याट्रीको सहयोगमा चल्नेछ । यसलाई ब्लुतुथमार्फत् स्मार्टफोनसँग जोड्न सकिने जनाइएको छ । सोनीका अनुसार दुईघन्टा चार्जगर्दा यो ९० संचालनमा आउनेछ । […]
१५ असार, काठमाडौं । अमेरिकाको एक कम्पनीले थ्रीडी प्रिन्टिङ प्रविधिको प्रयोगबाट एक त्यस्तो घर तयार गरेको छ जसमा बस्नेले मंगल ग्रहको अनुभव लिन सकिनेछ । यसलाई ‘टेरा’ नाम दिइएको छ । न्युयोर्कको हडसन नदी नजिकको जंगलमा यस प्रकारका केही घरहरुको निर्माण पनि पूरा भइसकेको छ । छिट्टै यसलाई बिदा मनाउन आउने पर्यटकका लागि खुला गरिनेछ […]